SomaliaReport: Dagaalo Khadhaadh oo Ka Dhacay Xaafadaha Hiiraa
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaalyahanada Ahlu Sunna Wal Jamaaca (ASWJ) iyo malayshiyaad deegaanka ah ay maalinkii labaad dagaalo kula jiraan xaafado ku dhaw caasimadda Hiiraan, magaalada Baladweyne.
Sida ay ilaha deegaanku u sheegeen wargayska Somalia Report, ugu yaraan 40 ruux yaa ku dhintay dagaaladaas in ka badanna way ku dhaawacmeen, dhimashada inteeda badan ayaa ah dhinacyada dagaalamayey in kasta oo aan wali la xaqiijin.
ASWJ iyo malayshiyaadka deegaanka ay is kaashanayeen ayaa arooronimadii khamiista weeraro ku qaaday saldhigyada al-Shabaab ee degmoyinka afar irdood , Irshaad iyo duleedka degmada Maxaas. Waxaana sidaa sheegay dadka deegaanka.
“Saacadihii la sooo dhaafay ayaa waxaa dhacay dagaalo khadhaadh, waxaanan aragnay maydad badan oo dhulka daadsan” mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa qariyey ayaa sidaa u sheegay wargayska Somalia Report.
Sheekh Abu Muscab oo ah afhayeenka milatari ee al-Shabaab ayaa saxaafadda u sheegay inay xoogaggoodu iska caabiyeen weeraradii ASWJ.
“Dib ayaan u riixnay cadawgii islaamka, xoogaggeena ayaana hadda gacanta ku haya meelihii lagu dagaalamay”. Ayuu yidhi.
Taliyihioi hore ee Baladweyn, Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa beeniyey sheegashada Abu Muscab, wuxuuna sheegay inay ASWJ ay gacanta ku hayaan aagaggii lagu dagaalamay.
“Waa dacaayaddii lagu yaqaanay iyaga, dagaalyahaniinteena ayaa gacanta ku wada haya dhamaan meelihii la isaga hor yimid, waxayna wada eryeen xoogaggii al-Shabaab.”
Waxaa sidoo kale lagu wada dagaalamay meelo kale oo ay ka mid yihiin xaafadda bacaad o dhaw kilometer waqooyi ka jirta Baladweyn iyo Faafgumaare oo konfurta bari ee Beledweyn ku taal..
Lama oga tirade dhimasho ee iska horimaadyadaas, Abu Muscab ayaase sheegtay inay dhawr askari ciidamadiisu ka dileen ASWJ.
Wararku waxay sheegayaan inay al-Shabaab gacanta ku hayso garoonka dayuuradaha halka ay ciidamada dawladdu ku sugan yihiin xaafadda Ceelgaal.
Laba Nin oo Madaxa Laga Jaray
Waxay ciidamada al-Shabaab isugu yeedheen shacabkii ku sugnaa xaafadda Hees ee ku taal degmada Matabaan si ay u arkaan maydadka laba nin oo madaxa laga jaray, waxayna sheegeen inay ahaayeen askartii ASWJ.
“Waxay ahayd wax laga argagaxo, waligay ma arag dad madaxa laga jaray hadda ka hor”. goobjoge meesha ku sgnaa ayaa sidaa u sheegay wargayska Somalia Report.
Sarkaal dawladda ka tirsan ayaa beeniyay arinkaa, isloa markaana sheegay inay labadan nin ahaayeen beerolay, o aysan ka tirsanayn ciidankooda.
Ciidanka ASWJ ayaa dhankodoa iyaguna soo bandhigay maydad ay sheegeen inay yihiin al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaan ka soo saarin wax jawaab ah sheegashada ASWJ.
Dagaalo Ka Dhacay Shabeelle Valley
Al-Shabaab ayey aagag badani dagaalo kaga furan yihiin ka dib markii ururku weeraro ku qaadeen malayshiyooyinka deegaanka ee Buurt Qawlet. Ilaa seddex ruux ayaa la sheegay inay ka kala dhintee dhinacyadii dagaalamay, halka dhaawucuna gaadhay shan qof.
Xaaladda gobolka ayaa aad u kacsan, dadka deegaanka ayaa suuqua Baladweyn ka qaadanayey wixii raashin ama alaab ahayd ee ay qaadan kareen. Dagaalada dhinacyadan iska so horjeeda ayaa noqday kuwo joogto ah isla markaana aan la saadaalin Karin.